Duufaan Hacks Russell - Masaf Of The Day
Waxa ugu horeeya ee aad ku baran doonaa oo ku saabsan dublad in 2018 waa in Russell Bronson waa takhasus ugu caansan on mawduuca maalmahan oo uu dhan kor fidiyeen meeshii.
Tani ma aha coincidental, waxaa loo suuq ma aadan ammaanin.
Ninka yaqaano sida loo maareeyo dublad la isticmaalayo habab anshaxa in si dhab ah u shaqeeyaan.
Google kor "Duufaan Hacks Russell" iyo in la doonaa in aad u horseedi in uu lagacna aad tababar lacag la'aan ah halkaas oo uu sharaxayaa sida uu ka soo ururinta jeeg lousy ka soo baxeen, shuqulka kiraystay horumarinta masaf Misbaax dhigaya isaga kasban a $18,000 maalin.
nin Tani ma tegi agagaarka baadiyaha, uu iibinta wax soo saarka sare oo tayo leh in uu isaga samaynta lacagta iyo in uu diyaar u qarsoon uu wadaagaan in ku alla kii doonaya inuu ku shaqeyn doonaa si adag si ay u noqon sayidkii uu aayahooda ka.